Isizinda se-Ultrasonic insangu - Hielscher
Isihloko sokusetshenziswa: "Isiqhamo se-Ultrasonic se-Cannabis"
I-cannabis uhlobo lwezitshalo eziqhakazayo emndenini weCannabaceae. Kukhona izinhlobo ezintathu ze-cannabis, okungukuthi i-Cannabis sativa, i-Cannabis indica, i-cannabis ruderalis. ICannabis sativa uhlobo olwaziwa kabanzi futhi olusatshalaliswa kakhulu.
Uma kukhulunywa nge-cannabis ne-cannabinoids, okuyizinto eziyinkimbinkimbi ye-cannabis, kufanele ihlukaniswe phakathi kwe-hemp nentsangu. Isitshalo se-hemp sinesibalo esingaphansi kuka-0.3% we-psychoactive compound THC (tetrahydrocannabinol, into ekwenza ube “phezulu”), ngenkathi insangu ichazwa njengesitshalo seCannabis sativa esinokuqukethwe kwe-THC okungaphezulu kuka-0.3%. IHemp ikhulelwe ukukhiqizwa kwe-CBD (cannabidiol) nefayibha yezimboni; insangu isetshenziswa kokuqukethwe kwayo kwe-THC, okuphathwa ngayo ngenhloso yokwelapha noma yokuzijabulisa.
Ukwehlukanisa amakhompiyutha we-bioactive, abizwa ngama-cannabinoids, avela kwisitshalo se-cannabis, kudingeka indlela enamandla futhi ethembekile yokususa. Isizinda se-Ultrasonic sidlula kakhulu amasu ajwayelekile wokukhishwa okufana nokukhishwa kwe-CO2 ekukhuphuleni isivinini, isivinini sokukhishwa, ukuphepha okusebenzayo nobungani bomsebenzisi. I-Hielscher Ultrasonics ngumlingani wakho onolwazi lokukhishwa kwe-cannabis eyinkimbinkimbi nganoma yisiphi isilinganiselo. Ukumboza lonke uhla kusuka kuma-compact, ama-ultrasonicators aphethwe ngesandla kuze kube kuzinhlelo ezigcwele zokuthengisa ezingaphakathi kwezentengiso, i-Hielscher izokunikeza iprosesa efanelekayo kakhulu ye-ultrasonic yenqubo yakho yokususa kanye nokuqondisa.
Funda kabanzi mayelana nokukhipha i-cannabis isizinda nemishini!
Amakhemikhali awuketshezi ajulile e-Eutectic wokukhishwa okusebenza kahle
Ama-solvents ajulile e-eutectic (ama-DES) nama-solvents e-eutectic ajulile angokwemvelo (NADES) anikeza izinzuzo njengamakhemikhali okususa kumazinga amaningi futhi ngaleyo ndlela ayindlela ethembisayo kuma-solvents ajwayelekile we-organic. Umsebenzi we-solution eutectic ojulile usebenza kahle ngokuhlanganiswa nesizinda se-ultrasonic futhi…
Izidakamizwa ezi-Smart nezithasiselo ze-nootropic zidliwa "njengezithuthukisi eziqondayo" ukuze zikhulise ukusebenza kwengqondo, umthamo wobuchopho, ukugxilisa ingqondo, inkumbulo nobuqambi, ukuqinisa ugqozi namandla engqondo kanye nokusekela impilo yobuchopho. Ukukhuthaza ezokuthutha…
I-Ultrasonication yaziwa kahle ukuthi isebenza kahle kakhulu ekuhlelweni kwamakhemikhali we-liposomal. Izinhlobo zokwenziwa kwe-liposome ejwayelekile zihlanganisa i-vitamin C, i-CBD, i-curcumin, i-quercitin, i-astaxanthin, ama-peptides kanye nezinye izinto eziyinkimbinkimbi ngokusebenzisa i-ultrasonication. I-Ultrasonic liposome encapsulation elula, esheshayo…
Amakhemikhali Amanzi Nolan-Nano-THC Amanzi nge-Solution
Ukwakhiwa kweziphuzo ezithuthukisiwe ze-THC kuyinselele. - Iziphuzo ezisetshenziswe yi-THC kufanele zithuthukiswe ukuze zinikeze i-bioavailability ephezulu kanye ne-potency, ukuqina kwesikhathi eside nokubukeka okucacile. I-Ultrasonic nano-emulsization ye-THC ibe isiphuzo isebenza ngempumelelo futhi iyasebenza…